SomaliaReport: Suxufi German ah oo Laga Tarxiilay Puntland
By MJ 01/21/2012
"Waxaa magaalada dekadeedka Boosaaso ee Puntland laga tarxiilay Suxufi German ah galabnimadii Khamiista isagoo saraakiisha nabadsugidu ku eedeyeen inuu ka dhuuntay nabadsugidii illalinaysay si uu ufuliyo ‘shirar qarsoodi ah’," sida ay sheegeen ilaha Wasaarada Nabadsugida Puntland oo la hadlay Somalia Report.
Saraakiisha gagida dayuuradaha Boosaaso ayaa xaqiijiyey in Leduele soo gaaray Puntland Janaayo 13 2012 isagoo ka soo duulay Dubai. Markii uusoo degabay, dawlada Puntland ayaa siisay labo askarta SPU ah inay waardiyaal khaas ah u nowdaan intuu safarkiisa ku jiro.
Wuxuu labo maalmood ee ugu horey marti ahaan useexday xarunta Gudiga Qaxootiga Danish-ka (RDC), laakiinse Somalia Report waa xaqiijin wayday sheegashadan.
Sida ay saraakiisha degaanku sheegeen, mudo ka bacdi, leduele wuu ka dhuuntay nabadsugidiisii isagoo ka tegay xarunta DRC. Waardiyaalka SPU markii ay ogaadeen inuu maqanyahay ay xarunta Boosaaso ogeysiiyeen in la afduubay.
Mudo kadib ayey Leduele iyo saaxiibkii Daa’uud kusoo laabteen xarunta iyagoo gaarigoodi wata. Labadoodiiba waxaa markiiba xiray SPU, waxaase lasoo daayey markiiba kadib markii ay saraakiisha Borogaraamka Cunnada Aduunku (WFP) lasoo xiriireen Wasiirka Nabadsugida Puntland Khaliif Isse Mudan.
Leduele wuxuu Boosaaso uyimid inuu la shaqeeyo WFP oo ah sababta kooxdu ninka German ka ah u gaysay xarunta markii laga soo daayey saldhiga boliiska ilaa intii laga tarxiilay Janaayo 19-keedii.
Daaiuud oo ka mid ah shaqaalaha xafiiska Mercy Corp ayaa dafiray inuu afduubay suxufiga isagoo dawlada usheegay casho u tageen guriga Daa’uud sila markiina kusoo laabteen xarunta.
Waxaa kaloo lasoo tabiyey in labo suxufi oo kale midna Kanadiyaan yahay iyo islaan Keenyaati tahay lagu arkay xeebaha degmooyinka gobolka Bari, iyagoo la sheegay inay wada shaqeeyaan Leduele.
DRC iyo WFP midkoodna kama hadlin arrintan.